Axmad – Page 5 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Waare oo xil ka qaadis ku sameeyey Yuusuf Dabageed.
Axmad	 Jun 8, 2019 0
Wareegto ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday gudoomyihii gobalka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Daba-geed. Isla wareegtada ayaa gudoomayaha gobalka loogu…
Masuul sare oo katirsan Ciidamo daacad u ah Imaaraadka oo lagu dilay Yaman.
Wararka ka imaanaya wadanka Yaman ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ay ku guuleysteen iney dilaan sarkaal sare oo katirsan malleeshiyaadka daacadda u ah dowladda Imaaraadka ee dhibaatada ka wada koonfurta Yaman.…
Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada Jabuuti ee heysta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Wararka halkaa naga soo gaaraya ayaa sheegaya in Jabuutiyaanka lagu helay meel u dhow buundada…
Ciidamada Al-Shabaab Oo la wareegay Af-Urur.
Dagaalyahanno katirsan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku heynta deegaanka Af-Urur oo hoos yimaada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warar kusoo dhacaya warqabadka Idaacadda…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 08 06 2019
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 04-10-1440
Axmad	 Jun 7, 2019 0
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 07 06 2019
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan Riix Si aad U Dhageysatid Warka Subax 07 06 2019
Xarakada muqaawamada Xammaas ee dagaalka kula jirta Yahuudda ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Maraykanka ay maamulka Yahuudda u gacan gelisay Aqoonyahan Filastiini ah oo sanado badan u xirnaa. Aqoonyahanka ay Maraykanka u dhiibeen…
Axmad	 Jun 6, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 06 06 2019